कला / शैली Archives - Page 21 of 23 - Safal Awaj Safal Awaj
गीतकार परिश्रमीको ‘मायाको घरबार’
काठमाडौं, ३० भदौ । वरिष्ठ गीतकार डीपी दाहाल परिश्रमीले 'मायाको घरबार' म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन । डिलाइटेड नेपालको प्रस्तुती रहेको गीतमा परिश्रमीले मायाप्रेमको कथावस्तुलाई समेटेका गरेका छन । मर्मस्पर्शी शब्द रहेको गीतमा गीतकार परिश्रमीले मायाप्रेममा रहेका युवायुवतीमा उब्जिने मनका कुरादेखि आफ्नो मायालाई पारिवारिक तहमा कसरी अवतरण गराउने सम्मको भावलाई अटाएका छन । गायीका अस्मिता अधिकारी र पुरुषोत्तम सुवेदीले स्वर दिएको उक्त गीतमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका स्थापित नायक पुष्प खड्का र नायिका केकी अधिकारीले अभिनय गरेका छन । लोक लयमा… पुरा पढौ
साङ्गीतिक श्रृङ्खला ‌”बि.एस.रिदम ब्लाष्ट” शुरु
पोखरा, २८ भाद्र । बि.एस. ईन्टरटेण्टमेन्ट पोखराले संचालन गरेको‌ साङ्गीतिक श्रृङ्खला " बि.एस.रिदम ब्लाष्ट"को पहिलो‌ श्रृङ्खला हालै सार्वजनिक भएकाे छ । आफ्नै युट्युब च्यानल बि.एस. ईन्टरटेण्टमेन्टद्वारा सार्वजनिक भएकाे पहिलो‌ श्रृङ्खलामा पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेको‌ पोखरेली ब्याण्ड डिमर्ज ब्याण्डको प्रस्तुति रहेको थियाे । बिशेषत नयाँ पुस्ताका श्रोता तथा दर्शकको साङ्गीतिक तृष्णा मेट्न र नयाँ प्रतिभाहरुलाई अवसर प्रदान गरि‌ समग्र नेपाली गीत संगीतको उठानको‌ उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरिएकाे ‌ बि.एस. ईन्टरटेण्टमेन्ट पोखराका संचालक सन्जु सुनारले जानकारी दिए । पोखरामा रहेका स्थापित एवम्… पुरा पढौ
निर्देशक दिवशको कोरोनाको कथामा फिल्म “ढोका” दर्शक माझ
काठमाडौं, भदौ २२ । “बरु बनको बाघले खाओस, मनको बाघले नखाओस् ।” यो उखान हाम्रो नेपाली जनजीवनमा निकै चलनमा छ । मनबाट सबै कुरा निर्देशन हुन्छन् । मानिसले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा सचेतता अपनाउने गर्नुपर्छ । यहि सारलाई निर्देशक दिवश धितालले ‘ढोका’ फिल्ममा उतारेका छन् । अहिले विश्व कोरोना भाइरसको महामारिमा परिरहेको छ । नेपाल पनि यसको चपेटामा परिरहेको छ । मानिसमा के हुने हो ? कसो गर्ने हो ? एक प्रकारको बेचैनी र मनोवैज्ञाकि असर परेको देखिन्छ… पुरा पढौ
सुवास कुथुमी राईको ‘बैंशालु जोवन’
काठमाडौं । सुवास कुथुमी राईको 'बैंशालु जोवन' बोलको गिज बजारमा आएको छ । जेनेक्स मिडियाको अअफिसियल युटुव च्यानलमार्फत वैशालु जोवन सार्वजनिक गरिएको हो । गित सुवास आफैले लेखेका हुन् । गितको संगित तथा स्वर समेत सुवासकै रहेको छ । भिडियो भने जेनेक्स मिडियाले निर्माण गरेको हो । पुरा पढौ
“हे मेरी कान्छु र सिरु फुल्यो सेतै” गीतबाट उकालो लागेका गायक बुढाथोकी
काठमाडौं, १६ भदौ । नेपाली गीत संगीतमा यतिबेला चर्चामा रहेको नाम गायक रामजी बुढाथोकी हो । चर्चित लोक गीतहरु गाएर नेपालभर चिनिएका छन् । उनले छोटो समयमा धेरै र कर्णप्रिय गीतहरु गाएर सबैको मन जित्न सफल भएका छन् ।“हे मेरी कान्छु र सिरु फुल्यो सेतै” गीतबाट उकालो लागेका गायक बुढाथोकी पछिल्लो समय तीज गीत “तीजको ब्रत” बाट पनि निकै चर्चामा रहेका छन् । जसमा चर्चित गायिका सिता घिमिरेले उनलाई साथ दिएकी छन् । गीतमा सुन्दरी मोडल भनेर चिनिएकी अन्जली अधिकारीले… पुरा पढौ
एमाले १० औं-राष्ट्रिय महाधिवेशन-यी हुन् ओलीले घाेषणा गरेका ३०१ सदस्यहरू (सूचीसहित)
भरतपुर, १३ मङ्सिर । नेकपा (एमाले)को सौराहामा जारी १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आज बिहान…